G-8: Xaraf ama Hakad Lagama Bedeli Doono Qodobadii La Saxiixay maalintii 29-janaayo ee 2004.
Hogaamiyayaasha kooxda G-8:-saxiixa heshiiska 29-Janaayo wax khiyaamo ah kuma jirin.........
Hogaamiyayaasha siyaasada kooxda G-8 ee shirka nabada soomaalida ayaa galabta shir jaraa'id ku qabtey xarunta shirka uu ka socdo ee Mbagathi.
Hogaamiyayaasha kala ah: Maxamed Qanyare Afrax, Cumar maxamud Maxamed Filish iyo Mawliid macaaani Maxamuud ayaa shirkaasi jaraa'id kawada hadley, waxaaan ugu horeytii kahadlay Maxamed qanyare Afrax oo ka hadley saxiixa heshiiskii 29-janaayo ee ka dhacey STATE HOUSE in uu ahaa mid dhaxal ah oo taariikh u noqon doona shacabka soomaaliyeed, waxaa kaloo uu sheegay in madaxweynaha dalka kenya uu heshiiskaasi ku tilmaamey in la jebiyey darbi ku gudbanaa shirka nabada soomaalida ee oo 15-bilood ka socdey wadanka kenya.
Hogaamiyayaasha kooxda G-8 ayaa si cad u sheegay in kulankii wada tashiga ee safari park iyo saxiixa heshiiskii hogaamiyayaasha ee 29-janaayo in aan ku jirin wax khiyaamo iyo is hoos galin ah.
Waxay kaloo sheegay in xulida baarlamaanka ay ka qay galayaan tiradi ka qayb gashey kulankii wada tashiga ee safari park ka socdey muddo 18-casho ah taasoo aheyd 39-qof.
Hogaamiyayaasha siyasada kooxda G-8 ayaa taageeera buuxda siisayay go'aankii shirkii jaraa'id ee wasiirka arrimaha dibada dalka kenya Klonzo Musyoka oo ku saabsanaa cidii ka hortimaada heshiiskii 29-Janaayo ,in loo aqoonsan doono nabad diid, cunaqabatreyn la saari ,maxkamad la horgeyn doono.
Hogaamiyayaasha siyaasada ee G-8-da ayaa heshiiska ku tilmaamey mid kii lagu heli lahaa dawlad soomaali oo loo dhan yahay oo dib uga dhalata dalka soomaaliya 14-sanno oo dawlada la`aan ah ka dib. Waxa kale oo hogaamiyayaasha kooxda G-8 ay sheegeen in xaraf ama hakad aan laga bedeli doonin qodobadii la saxiixay maalintii 29-janaayo ee 2004.